Bangladesh: Tetika fampihorohoroana iray hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 4:07 GMT
Namely an'i Bangladesh indray ny fampihorohoroana. Nitatitra i Adda
Tena nampalahelo indray ny fisehon'izany. Namono mpitsara roa ny vondrona mpampihorohoro ao Bangladesh… Tranga mampalahelo izay nitranga tao anatin'ny taona vitsivitsy ary nahitana ny firongatry ny fondamentalisma sy ny fikatrohana ara-pinoana tao Bangladesh. Nanomboka teo dia niara-dia tamin'ny olon-dratsy Jamat-i-Islami sy Islami Forum mba ho tonga eo amin'ny fahefana ny Antoko Nasionalista Bangladesh (BNP); Notompoina ara-politika sy ara-pitantanam-panjakana tao Bangladesh ny vondrona Islamista.
Nihevitra i Rezwan ao amin'ny 3rd World View fa mety mihoatra noho ny zavatra hita ny zava-misy.
Misy ny firaisana tsikombakomba lalindalina kokoa amin'izany. Mahita ny fitsarana ho vato misakana lehibe indrindra ho azy ireo taorian'ny fipoahana baomba tamin'ny 17 Aogositra 2005 ny mpitolona Islamika. Nisambotra ekstremista miisa 500 mahery ny polisy ary nandrara ny vondrona Islamika roa (iray amin'izany ny JMB). Eo an-dàlana amin'ny fampisehoana ny hao (kongona) ny polisy ary hanomboka ny fitsarana haingana. Noho izany dia mety ho fandaharam-potoan'ireo izay mikasa ny hanangana lalàna Islamika ao Bangladesh ny fanozongozonana ny rafi-pitsarana.
Ary hoy i Salaam Dhaka
Tompokolahy sy Tompokovavy, tonga i Jamaat. Azontsika atao ny misaotra an'i Begum Khaleda Zia noho izany!